Xbox ye iPhone, yakakosha kana iwe uine Microsoft koni | IPhone nhau
Xbox ye iPhone, yakakosha kana iwe uine Microsoft koni
Mazuva ano haugone kufunga kuve ne chigadzirwa chakabudirira munzvimbo ye tech isina shamwari yeApple, uye Microsoft yanga ichizviziva kubva pakuenda. Ndokusaka iyo kambani yeRedmond yakapa huwandu hwakawanda hwezviwanikwa kune yayo app Shamwari yeiyo Xbox, uye inguva yekutarisisa.
Chinangwa chikuru chekushandisa ndechekuti isu tinogona kuita zvimwe zviito nekukurumidza kupfuura zvataizoita kubva kumutambo wemutambo nerekure. Saka zvinonakidza kwazvo kushandisa chishandiso cheiyo manejimendi eakavanzika mameseji nevamwe vashandisi, kuisa mameseji (zvinoda kuve pane imwechete network yeWiFi) kana kuona rondedzero yeshamwari uchitamba mutambo usingavhiringidze mutambo, semuenzaniso.
Uye zvakare, iko kunyorera kunotibvumidza kutenga izvo zvatinoda, semuenzaniso kubva kubasa uye kuti patinosvika kumba mutambo watove yakadhindirwa kuXbox, tichigara tichifunga kuti isu hatigone kuita Energy Kuchengetedza sarudzo inogoneswa mumutambo mutambo, nekuti koni inofanirwa kuchengetedza kubatana kwenetiweki kuti ikwanise kurodha mumitambo painenge iri kure.
Zvakare kucherechedzwa ndiko kwekutanga chikafu uko kwatinogona kuramba tichiziva nezvose zviri kuitika kutenderedza koni yedu: kufamba pakati peshamwari, mavhidhiyo uye anotora kubva kune vatinosangana navo, nhau pamusoro pemitambo yatinayo kana zviziviso kubva kuMicrosoft zvimwe zvezvinhu zvatinogona kuona muchikamu chino.
Pamwe imwe yeiyo pfungwa dzinonakidza kwazvo ngazvive kusundidzira notices, iyo inotizivisa isu nezve zviitiko zvese pasina kuve neconsole on kana neiyo Xbox webhusaiti yakavhurwa. Tinogona saka kuziva kana meseji yatambirwa kana chii chiri kuitika mukirabhu yedu kubva ku iPhone chero nguva yezuva. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyo app haigone kumisikidzwa kuti isagamuchire zviyeuchidzo zvezviitwa, izvo zvinogona kunge zvichishungurudza kune vedu isu vanoda kuziva panguva dzezvakavanzika mameseji asi isu hatisi kufarira kugamuchira ziviso pese patino tora itsva Gs.
Iko kushandiswa kuri zvachose vakasununguka, inoshaya kushambadzira uye mushure memakore mashoma inozopedzisira yashanda pamhepo inogamuchirwa, kunyange izvi zvingave zvichikonzerwa nekureruka kukuru kweiyo iPhone 7, hongu. Iva zvazvingaita, zvakakosha kana iwe uine Xbox.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Xbox ye iPhone, yakakosha kana iwe uine Microsoft koni
Kirasi yekumhan'ara mhosva yeApple kukiya iPhones kana uchipinda mumota
Podcast 8x18: Iyo iPhone 8 inotanga kukonzera kunzwa